Mareykanka oo hakinayo shidaalkii uu siin jiray diyaaradaha dagaalka ee Sucuudiga | Baydhabo Online
Mareykanka ayaa sheegay inuu joojinayo shidaalkii uu hawada ku siin jiray diyaaradaha dagaalka ee Sucuudiga ee ka dagaalka ka wado Yemen.
Warbaahinta Sucuudiga ayaa ku warrantay in xukuumadda Riyaadh iyo dalalka saaxibada yihiin ee khaliijka ay sare u qaadeen awooddooda ah inay diyaaradahooda dagaalka ka wado Yemen ay ku shubtaan shidaalka isla markaasna muqstaqbalka ay arrintaasi si madax bannaan u samaysan karaan.
Dhanka kale, warbaahinta Mareykanka ayaa soo xigatay saraakiil Amerikaan ah oo sheegayo in maamulka Trump uu shaaca ka qaadayo inuu joojinayo adeegyadii dhanka militariga uu u fidin jiray Sucuudiga oo hoggaaminaya dagaalka diyaaradaha huwanta ay ka wadaan Yemen, horraantii bishan ayay ahayd, Markii mareykanka uu ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan yemen.
Waxaa jiray cadaadis caalami ah oo la saarayo Sucuudiga oo ah inuu hakiyo duqaynta uu ka wado Yemen, maadama xaaladda ban’aadanimo ee dalkaasi ay kasii dareyso.
Qaramada Midoobey maxay ka tiri dagaalka Yemen?
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa waxa uu ku baaqay in la soo afjaro qulqulatooyinka ka soconaya dalka Yemen, iyo weliba in si degdeg ah loo joojiyo dagaallada ka soconaya agagaarka goobaha muhiimka ah iyo weliba meelaha ay dadka badan ku nool yihiin.